Jubbaland oo soo iibsatay diyaarad lagu dhabar jabinayo xayiraadda DF ee Kismaayo - Awdinle Online
Jubbaland oo soo iibsatay diyaarad lagu dhabar jabinayo xayiraadda DF ee Kismaayo
Magaalada Kismaayo waxaa maanta gaaray Madaxweynayaashii hore ee dowlad Goboleedyada Koofur Galbeed iyo C/Kariin Xuseen Guuleed.
Wafdiga Shariif Xasan iyo C/Kariin Guuleed waxaa Garoonka diyaaradaha Kismaayo kaga hortagay labada Madaxweyne ku xigeenka ee Jubaland C/Raxmaan Lugadheere iyo Maxmauud Sayid Aadan.
Waxaa la socda daraasiin Xildhibaanno ah kuwaas oo Magaalada Kismaayo u tagay ka qeybgalka caleema saarka Axmed Madoobe.
Warar hoose ayaa sheegaya in 9ka Bishan October ay dhaceyso xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe,waxaana halkaas ku sii qul qulaya mas’uuliyiin kala duwan.
Sida wararku sheegayaan Diyaarada Wafdigaan sida tooska ah uga dajisay Magaalada Kismaayo oo la sheegay inay soo iibsatay Maamulka Jubbaland ayaa loogu tala galay inay soo qaado wafuuda ka qeyb galeysa caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Jubbaland ayaa ku qasbanaatay inay soo iibsato Diyaaradaan kaddib markii dowladda Federaalka ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha rayidka in aysan qaadi karin siyaasiyiinta aadaya Kismaayo.
Previous articleSomaliland oo ku gacan seyrtay dalabkii cayrinta wakiilka Jabuuti
Next articleDF Somalia oo madaxweyne Xaaf siisay fursad muhiim ah iyo tallaabo uu qaadayo